Ọkachamara Semalt: Gịnị bụ Wepu Web Page Scraping?
A na-eji ọrụ ntanetịime weebụ iji wepụ ma ọ bụ kpochapụ data sitere na weebụ dị iche peeji nke dị na Web Wide Web, na ọ gụnyere gụnyere ịchekwa data a wepụtara na niile n'ime nchekwa data dị iche iche iji mee ka nyocha, nhazi na nzacha. Ị nwere ike iji ọrụ weebụ a iji kpochapụ data niile ị chọrọ site na ibe weebụ niile nke ebe nrụọrụ weebụ. Ọrụ ahụ gụnyere ịchekwa data ahụ n'ime nchekwa data, spreadsheet, ma ọ bụ usoro ọ bụla ọzọ - gummiband mit 2 haken.
Ihe ọ bụla ị chọrọ, ọrụ nchịkọta data a nwere ike ijikwa ya. Ị chọrọ nyochaa ọnụ ahịa nke ndị asọmpi? Ịchọrọ iji nyocha ma ọ bụ detuo data ọdụ data? Ọrụ ntanetị weebụ bụ naanị ihe ị chọrọ. Naanị ị ga-ezipụta ọnọdụ na ihe achọrọ. Ọ bụghị naanị na a ga - enweta data maka gị, a ga - agbanwekwa ya na ụdị gị.
Ntinye nke obere ọnụ ọgụgụ
Ọrụ a nwere ike iji dọpụta ma ọ bụ nyochaa obere mkpụrụedemede ndị metụtara ngwaahịa. Dịka ọmụmaatụ, enwere ọtụtụ ngwaahịa, ọnụahịa ha na ahịa ha na-agbanwe mgbe niile. Ọ bụrụ na ị nwere ma ọ bụ nwee mmasị na ngwaahịa ole na ole ma chọọ nyochaa ego ha na ọnụego ha, ị nwere ike iji ọrụ a. Ka ọnụ ọgụgụ ahụ gbanwere na saịtị ahụ, ha ga-atụgharịkwa na saịtị gị. Nke a ga-azọpụta gị ihe mgbu nke ịmegharị site na ndepụta mbụ nke ngwaahịa ugboro ugboro.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-enyochakarị ụgwọ ụgbọelu site na ụlọ ọrụ dị iche iche..Ihe ịma aka na nke a bụ na ha na-elele ọtụtụ weebụsaịtị. Ịtụle ọnụego na taabụ dị iche iche nwere ike isi ike. Ha aghaghị ịpị na taabụ mgbe taabụ. Ma nke a nwere ike ịdị mfe karịa ọrụ ntanetị weebụ. Ha nwere ike ịnweta ya niile na otu emelitere na ibe. Nyochaa ntinye ego nkwụnye ego dị mfe karịa na otu ibe. Ọrụ ntanetị weebụ ga-enyere gị aka wepụ ọnụego sitere na weebụsaịtị dị iche iche wee chekwaa data niile n'otu peeji maka gị. Cheta na ka a na-emelite ego na ebe nrụọrụ weebụ na ebe nrụọrụ weebụ ga-emelitekwa nke gị.
Wepụ ahịa na ihe oyiyi nke ngwaahịa dị iche iche na ebe nrụọrụ weebụ na-azụ ahịa
Dịka ọmụmaatụ, ndị mmadụ na-azụ ahịa mgbe nile. Ịnwere ike iji ọrụ a wepụ ọnụ ahịa nke ere ahịa site na weebụsaịtị dị iche iche. Ị ga-enweta ozi ọhụụ mgbe niile. Ya mere, mgbe ọ bụla ịchọrọ ịga maka nri, ị ga-elele faịlụ ahụ ma jiri ụlọ ọrụ ahụ mara mma. Ị nwere ike ịzụta ịzụta Kabeeji site na Ụlọ ahịa A, na Green Peas si ahịa B, wdg.
Mmegharị nke foto site na foto foto, ndị ngosi, ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ agbamakwụkwọ
I nwekwara ike iji ọrụ a ihe oyiyi na-ekpuchi si na ebe nrụọrụ weebụ dị iche iche jupụtara n'ọtụtụ ihe oyiyi. Ụfọdụ n'ime saịtị ndị dị otú ahụ bụ ụlọ ahịa foto, ebe ndị agbamakwụkwọ, na ndị na-eme ihe ngosi na-ekwu nanị ole na ole.
Mwebata n'ime ngwa dị ugbu a enweghị mgbalị
Ihe data a na-enweta site na ọrụ a nwere ike ịgbanye ngwa ngwa n'ime ngwa ọ bụla. Enwere ike itinye data na nchekwa data, usoro ihe omume, CSV, ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ a wuru na omenala. I nwekwara ike iji ọrụ ahụ iji wepu data sitere na ebe nrụọrụ weebụ siri ike na-egbochi ndị na-abụghị ndị òtù.
Ihe ọ bụla ị chọrọ ọrụ maka, dị na kọntaktị ụlọ ọrụ maka ọnụahịa na oge echere maka ịbịaru maka ọrụ nchịkọta weebụ gị.